Injineer Caan Ahaa Oo Maanta Qarax Loogu Xiray Gaarigiisa Ku Geeriyooday – STAR FM SOMALIA
Allaha u naxariistee waxaa maanta qarax miino lagu dilay Injineer Siidow Cismaan Cali, oo ka qayb qaatay dhismooyin badan oo laga hirgeliyay Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Injineerka oo la socday gaarigiisii, oo sida la sheegay qarax miino loogu soo xiray, ayaa wuxuu kula qarxay Wadada Sheelare Ee Buundada Degmada Xamar Jajab.
Injineerka oo dhaawac ahaan loogu qaaday goobaha caafimaadka, ayaa halkaasi ugu geeriyooday dhaawac culus oo qaraxaasi ka soo gaaray.
Gudoomiyaha Degmada Xamar Jajab Axmed Cismaan Dhoore, ayaa wuxuu xaqiijiyay geerida ku timid Injineer Siidow Cismaan Cali, isagoo dhinaca kalana ka tacsiyadeeyay geerida naxdinta leh ee ku timid.
Gudoomiyaha, ayaa xaqiijiyay in Injineer Siidow qaraxyada casriga ah loogu soo xiray gaarigiisii, taa oo sida uu sheegay markii dambe lagula beegsaday Degmada Xamar Jajab, oo uu deganaa.
12:00 duhurnimo ee maanta, ayaa jug culus laga maqlay Degmadaasi Xamar Jajab, waxaana la ogaaday in uu ahaa qarax miino oo lagu waxyeeleeyay Injineerka, oo ka yimid qurbaha.
Siidow, ayaa ka qayb qaatay dayactir lagu sameeyay Aqalka Madaxyooyada Magaalada Muqdisho (Villa Somalia), Daljirka Dahson, Xarunta Dowladda Hoose Xamar Ee Gaadiidka iyo goobo kaloo badan.
Illaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay tallaabada lagu dilay, waxaa dhinaca kalana jirin cid loo soo qab qabtay dilkiisii, sida uu Laanta afka Somaliga ee VOA uu u sheegay Gudoomiyaha Degmada Xamar Jajab.